Ny antony nanakatonana an'i Ukraine International Airlines PS752 noho Iran
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny antony nanakatonana an'i Ukraine International Airlines PS752 noho Iran
Nandritra ny toe-javatra nisy teo amin'ny Iran sy Etazonia, dia nisy ny sidina Iraisam-pirenena Okraina nahavoa ny miaramila Iraniana taorian'ny nialany tany Teheran. Miaraka amina mpandeha 167 sy mpikambana ekipa sivy ao anatiny, ny sidina Ukraine International Airlines PS752 dia nianjera teo ivelan'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenenan'i Imam Khomeini any Tehran ny 8 Janoary, fotoana fohy taorian'ny fiainganana.
Ny Organisation Aviation Civile ao amin'ny Repoblika Islamikan'i Iran (CAO.IRI) dia nilaza fa ny tsy fahaiza-mitantana ny rafitra radara an'ny fiarovan'ny fiarovan'ny fiaramanidina dia ny “hadisoan'olombelona” izay nitarika ny fianjeranan'ny fiaramanidina mpandeha Okrainiana tamin'ny voalohan'ny volana Janoary. Noraisiko hatramin'ny faran'ny volana janoary mandra-piverenan'ny European Airlines ny sidina mankany Iran.
Tamin'ny fanambarana navoakany tamin'ny sabotsy lasa teo, nilaza ny fikambanana fa nisy ny tsy fahombiazan'ny rafitra fiarovan'ny fiaramanidina finday noho ny hadisoana nataon'ny olombelona tamin'ny fanarahana ny fomba fampifanarahana ny radara, ka nahatonga ny "hadisoana 107 degre" tao amin'ilay rafitra.
Nanampy izy fa io hadisoana io dia "nanomboka loza mitatao", izay nanjary fahadisoana hafa tao anatin'ny minitra vitsy talohan'ny nitifirana ilay fiaramanidina, anisan'izany ny famaritana diso ny fiaramanidina mpandeha izay diso natao ho tanjon'ny miaramila.
Ny fanambarana dia nanamarika fa noho ny tsy fitoviana amin'ny radara dia nofaritan'ny mpandraharaha ny fiaramanidina fiaramanidina ho lasibatra, izay manakaiky an'i Teheran avy any atsimo andrefana.
Niaiky ny manampahefana Iraniana fa ny fiaramanidina dia nidina noho ny hadisoan'ny olombelona tamin'ny fotoana nitandremana ny fiarovan-tenan'ny fiaramanidina Iran noho ny fitomboan'ny fihetsiketsehana an'habakabaka amerikana taorian'ny fitokonana balafomanga Iran tany amin'ny toby miaramila Irak, izay misy ny fiaraha-mitantana notarihin'i Etazonia. hery ao amin'ny firenena Arabo.
Ny fitokonana balafomanga dia nitranga taorian'ny namonoan'ny tafika amerikana mpampihorohoro ny lietnà jeneraly Qassem Soleimani, komandin'ny Quds Force of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC), miaraka amin'ireo namany, ivelan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Baghdad noho ny baiko mivantana avy amin'ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump.
Na aiza na aiza ao amin'ny antontan-taratasin'ny CAO, izay tsy ny tatitra farany momba ny famotopotorana ny lozam-pifamoivoizana, dia nilaza ny faty fa ny voalohany amin'ireo balafomanga roa natomboka tao anaty fiaramanidina dia noroahin'ilay mpiasan'ny fiarovam-pirenena izay nanao zavatra “nefa tsy nahazo valiny avy tamin'ny Coordination Center ”Niankina taminy.
Araka ny tatitra, ny balafomanga faharoa dia voaroaka 30 segondra taty aoriana taorian'ny mpandraharaha ny fiarovan-tenan'ny fiaramanidina dia "nahatsikaritra fa ny tanjona tratra dia mitohy hatrany amin'ny làlan'ny sidina."
Ny mpampanoa lalàna ho an'ny faritanin'i Tehran, Gholamabbas Torkisaid, dia nilaza tamin'ny faran'ny volana lasa teo fa ny fidinan'ny fiaramanidina mpandeha Okrainiana dia vokatry ny hadisoana nataon'ny olombelona teo amin'ny mpiasan'ny tobin'ny fiarovam-pirenena, ka nanaparitaka ny mety hisian'ny fanafihana cyber na karazana hafa sabotage.
Nanampy izy fa ny sampan-draharahan'ny fiarovan-tena amin'ny finday no tompon'antoka tamin'ny fitifirana, satria tsy nahalala ny lalan'ny avaratra tsara ny mpiasan'izy ireo ary, toy izany, dia nanondro ny fiaramanidina ho lasibatra, izay manakaiky an'i Tehran avy any atsimo andrefana.
Fahadisoana iray hafa, hoy ny tompon'andraikitra ara-pitsarana, dia ny tsy niandrasan'ny mpandraharaha ny baikon'ny lehibeny taorian'ny nandefasany hafatra tany amin'ny foibe komandy ary nanapoaka ny balafomanga tamin'ny fanapaha-keviny manokana.
Nilaza ny minisitry ny raharaham-bahiny Iraniana Mohammad Javad Zarif tamin'ny 22 Jona fa handefa any Frantsa “ao anatin'ny andro vitsivitsy” ny firenena ny boaty maintin'ny fiaramanidina mpandeha Okrainiana.
Nilaza i Zarif fa efa nampahafantatra an'i Okraina ny Repoblika Islamika fa vonona handamina ny olana ara-dalàna rehetra momba ilay tranga mampihoron-koditra i Tehran, hametraka fombafomba amin'ny fanonerana ny fianakavian'ireo niharam-boina, ary hamerenana ny zotram-pitaterana an'habakabaka Okrainiana ho an'ilay tranga.
loharano: Press TV